Dadka badankood waxay diiradda saaraan feejignaantooda aaladaha sida websaydhyada, websaydhyada, mawduucyada, fiilooyinka, iwm. Dukaammada badankood ee internetka (iyo xitaa nolosha) way fashilmaan.
Si looga fogaado ka mid noqoshada dimoqraadiyaddaan mugdiga ah, iska ilaali dabinka wax walba oo sharad ku ah qalabka, oo waqti u qaad inaad dib ugu fiirsato aasaaska, sababaha jira, iyo geeddi-socodka.
Ma dooneyno riyadaada ah inaad dhisato calaamadda dharka inay kala daadato oo ay iska dhaqdo, ayna kala go'do xaqiiqada naxariis darrada ah ee suuqyada.
10 su'aalood, mana ahan hal dheeri ah, si loo qeexo xuduudaha mashruucaaga. Jawaab kasta oo aad bixisaa waxay fureysaa (ama xiri doontaa) albaabka xulashooyin dhowr ah. Dhamaadka layliga, waxaad ogaan doontaa dhinacyada aad u baahan tahay inaad dhameystirto, hagaajiso oo aad diyaariso, si aad naftaada u siiso fursadaha iyo joogtaynta ugu badan.
Ku Daabac Baahida: 10 su'aalood oo aad marka hore isweydiiso! Diisambar 12, 2020Tranquillus